လက်ဖက်ရည်သည် လူကို စွဲလမ်းစေပါသလား - Page 46 of 47 - Hello Sayarwon
Dr. Ye Pyae Hein မှ ရေးသားသည်။2ပတ် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ လက်ဖက်ရည်သောက်သုံးသူများအသင်း၏အဆိုအရကမ္ဘာပေါ်ရှိလူများသည် လက်ဖက်ရည်ကို အခြားဖျော်ရည်များထက်ပိုမိုသောက်သုံးကြသည်ဟုဆိုပါသည်။ လက်ဖက်ရည် သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သော်လည်းလက်ဖက်ရည်တွင်ပါဝင်သောကဖင်းဓာတ်မှာကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါ။ လက်ဖက်ရည်သောက်သုံးသောနည်းလမ်းနှင့် ပမာဏ ပေါ်မူတည်၍ ကဖင်းဓာတ်ကကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်များဖြစ်စေပါသည်။ သင့်တော်သောပမာဏတွင် လက်ဖက်ရည်သည် လူကိုလန်းဆန်းစေနိုင်ပြီးစွမ်းအင်ရအောင်နှိုးဆွပေးနိုင်သော်လည်းများပြားစွာသောက်သုံးပါက ကဖင်းဓာတ်ကို စွဲလန်းစေပါသည်။
ကဖင်းဓာတ်သည် ဗဟိုအာရုံကြောမစနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီး ပုံမှန်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် စွဲလန်းခြင်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ဆေးစွဲခြင်းလိုမျိုးတော့ ကဖင်းဓာတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်မပေးပါ။ သို့သော်လည်း ကဖင်းဓာတ်ကို စွဲလန်းပါက စွဲလန်းနေမှန်းသတိပြုမိမည်လည်းမဟုတ်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများပြုလုပ်ရန် ကဖင်းဓာတ်ကို ပုံမှန်သုံးစွဲနေရပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအခါ လန်းဆန်း၍စွမ်းအင်ပြည့်ရန်ကဖင်းဓာတ်ကိုပို၍ပို၍လိုအပ်လာသည်။ အိပ်ရာမဝင်ခင် ၆နာရီအတွင်း လက်ဖက်ရည်များများ သောက်တတ်သူများသည် အိပ်မပျော်ခြင်းဝေဒနာကို ခံစားရသည်။ ထို့ပြ င်ပိုမိုထိခိုက်လွယ်သူများတွင် အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲခြင်းနှင့်တကွ ကဖင်းဓာတ်ကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် အစာအိမ်ဝေဒနာများကိုလည်းခံစားရပါသည်။
အကယ်၍ ကဖင်းကိုရုတ်တရက်ဖြတ်လိုက်လျှင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပုံမှန်ရနေကျကဖင်းဓာတ်မရတော့သဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာများခံစားရသည်။ ကဖင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လက္ခဏာများမှာ
သို့သော် မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အရက်စွဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလက္ခဏာများလောက်တော့ မဆိုးရွားပါ။ ယခင်သောက်နေကြလက်ဖက်ရည် (သို့မဟုတ်) သောက်နေကျထက်အနည်းငယ်ပိုမို သောက်သုံးလိုက်ပါက ထိုလက္ခဏာများချက်ခြင်းသက်သာသွားမည်။
သင်သောက်သုံးသော ကဖင်းဓာက်ပမာဏကိုလျှော့ချပါ။ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကို၃ကြိမ်မှ၄ကြိမ် ခွဲ၍သောက်သုံးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ လက်ဖက်ရည်ကိုခဏတာ နှပ်၍သော်လည်းကောင်း၊လက်ဖက်ရည်သောက်မည့်ရေနွေး၏အပူချိန်ကိုလျှော့၍လည်းကောင်း ကဖင်းဓာတ် ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
လက်ဖက်စိမ်း၊ လက်ဖက်ဖြူနှင့်အခြားအရွက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဖက်ရည်ကိုအစားထိုးသုံးစွဲပါ။ လက်ဖက်ခြောက်အမည်းမှရသောလက်ဖက်ရည်သည် ကဖင်းဓာတ်ပါဝင်မှုအများဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အခြားလက်ဖက်စိမ်း၊ လက်ဖက်ဖြူနှင့်အခြားအရွက်များကိုပြုလုပ်သောလက်ဖက်ရည်ကိုသုံးဆောင်ပါ။
ကဖင်းဓာတ် လွန်ကဲစွာပါသောလက်ဖက်ရည်များကိုမကြာခဏသောက်သုံးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင်သောက်သုံးနေသော ကဖင်းဓာတ်ကိုဖြည်းဖြည်းစီလျှော့ချပါ။
လက်ဖက်ရည်ကို ချက်ခြင်းဖြတ်ပါကမလိုလားအပ်သောရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချခြင်းဖြင့်ထိုလက္ခဏာများကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
ကော်ဖီကဲ့သို့ပင် လက်ဖက်ရည်သည်လည်း ဦးနှောက်ကိုလှုံ့ဆော်၍စွမ်းအင်မြင့်စေပြီးစိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုကောင်းမွန်စေသည်။ သို့သော်လည်း သင့်တင့်မျှတသောပမာဏထက်ပို၍သောက်သုံးပါကစွဲလန်းခြင်းအပြင် ကဖင်းဓါက်၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါရနိုင်ကြောင်းသတိချပ်သင့်ပါသည်။
Caffeine addiction and tea. http://www.livestrong.com/article/382758-caffeine- addiction-and- tea/.
Accessed December 12, 2015